Mkpa ọ dị ime mmemme ụbọchị ụbọchị ụwa | Netwọk Mgbasa Ozi
Mkpa ọ dị ime mmemme ụbọchị ụbọchị ụwa
Taa June 8 bụ Obọchị Osimiri Worldwa. Oké osimiri bụ ihe ndabere nke ndụ na ụwa anyị, ọ bụ ya mere anyị ji ewepụta otu ụbọchị iji mee mkpesa na ichetara mkpa ha dị. Ichebe, ichebe ha na idebe ha n'ọnọdụ dị ezigbo mkpa dị mkpa, maka ndụ na-etolite n'ime ha, na anyị onwe anyị.
Na mgbakwunye, maka ihu igwe na ihu igwe gburugburu ụwa, oke osimiri na-enwe nnukwu mmetụta dị ka anyị ga-ahụ ma emechaa, ebe ha bụ ndị na-eme ọtụtụ ọnọdụ ihu igwe, na-abawanye ma ọ bụ na-ebelata na ọnọdụ okpomọkụ, wdg. Want chọrọ ịma ihe mere anyị ji eme ememme Obọchị Osimiri Worldwa?
1 Ihe dị mkpa oke osimiri maka ndụ mbara ala
2 Kedu ihe kpatara anyị ji eme emume Obọchị Osimiri Worldwa?
3 Olee ókè mmiri dị n'okike na ihu igwe na ihu igwe dị?
Ihe dị mkpa oke osimiri maka ndụ mbara ala
Ebe ọ bụ na oké osimiri na-ekpuchi ụzọ abụọ n’ime ụzọ atọ nke mbara ala, mkpa ọ dị adị nke ukwuu, ebe ọ bụ na ọ na-emetụta ihe ndị dị ndụ n’ụwa na mbara igwe. Oké osimiri na-emepụta akụkụ buru ibu nke ikuku oxygen anyị na-ekuru na, karịa ihe niile, ọ na-amị ọtụtụ ikuku carbon nke anyị na-ebute n’ikuku. Na mgbakwunye, ha na-enye nri na nri ndị dị ndụ ma ndị dị ndụ bi na ya ma anyị, ha bụ ndị na-achịkwa ọnọdụ ihu igwe ụwa ma bụrụ ihe dị mkpa maka akụ na ụba maka ọtụtụ mba gburugburu ụwa maka njem nleta, ịkụ azụ na akụ mmiri ndị ọzọ dịka mmanụ.
O bu ihe nwute, ihe di nkpa nke oke osimiri maka ndu di na mbara ala, na-eme ka mmadu jiri ya mee ihe n'enyeghi ya nsogbu, nke na eme ka nsogbu di oke ike nke na ebute ngbasawanye oke na mbibi nke otu. Anyị na-ekwu maka nrụgide mmadụ dịka ịkụ azụ, ịkụ azụ n'ụzọ iwu na-akwadoghị, usoro aquaculture na-enweghị ike, mmebi nke ebe obibi mmiri site na ịba ahịhịa ma ọ bụ mmetọ, iwebata ụdị nnụnụ na-ebibi ma chụpụ ụmụ amaala, mmetọ oke. , mgbanwe ihu igwe na acidification nke oké osimiri nke na-emebi oke mbibi.
Kedu ihe kpatara anyị ji eme emume Obọchị Osimiri Worldwa?
Anyị akpọwo aha mkpa osimiri dị maka ndụ niile dị na mbara ụwa na ọ bụ ihe anyị chọrọ ichekwa ma kpuchido ka ihe niile wee gaa n'ihu na-arụ ọrụ dịka o kwesiri. Anyị na-eme Daybọchị Osimiri Worldwa iji cheta onye ọ bụla ọrụ dị mkpa nke oké osimiri na-arụ na ndụ anyị na nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe niile dị ndụ na mbara ala. Chetara ha na ọ bụ oke osimiri na-ebute ikuku oxygen anyị na - ekuru. Ọ na-anwa ime ka ọha na eze mata banyere ihe omume anyị na-eme na ha ma si otu a mata ma mee ka nwa amaala mata.
N'aka nke ọzọ, ọ na-agba mbọ ịchịkọta ma jikọọ ọnụ ọgụgụ ụwa ọnụ iji nweta njikwa njigide nke oke osimiri ma mee ka a mara mma, akụnụba na ikike ha nwere.
Olee ókè mmiri dị n'okike na ihu igwe na ihu igwe dị?
Oké osimiri bụ ihe na-ekpebi ọtụtụ ihe omume ihu igwe na gburugburu ụwa ma na-emetụta ihu igwe. Nnukwu mmiri buru ibu dị n'oké osimiri na-etinye ikuku na ikuku ma na-ahazi okpomọkụ gburugburu ụwa. Ọ bụ iyi a maara dị ka eriri ebu ma ọ bụ iyi Thermohaline nke na-achịkwa okpomoku site n’ịhapụ okpomọkụ a na-enweta n’Oké Osimiri Pasifik na Oké Osimiri Indian ruo mgbe ọ ruru ma jụọ oyi ruo Antarctic.
Ọ na-emetụtakwa usoro ifufe na ebili mmiri, mmiri ozuzo ma ọ bụ idei mmiri na mpaghara ụfọdụ nke ụwa. Ka anyị cheta ama ama nke “El Niño"Ma"Nwata nwanyi”Nke ikuku na-ebuputa otutu mmiri na Oke Osimiri Pasifik. Ihe omuma ndia na eme ka oke oke ikuku ebe ufodu dika Peru na oke mmiri ozuzo na ebe ndi ozo dika India. Na mgbakwunye, ha na-akpalitekwa mmụba zuru ụwa ọnụ na ọnọdụ okpomọkụ pụtara na mgbanwe na usoro mmiri ozuzo.
Dịka ị pụrụ ịhụ, oke osimiri bụ ndụ anyị, ọ bụ ya mere na anyị ga-echekwa ha ma debe ha n'ọnọdụ dị mma ka anyị na ndị dị ndụ bi na ya na ihu igwe ụwa wee kwụrụ chịm ma dịkwa mma.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Mkpa ọ dị ime mmemme ụbọchị ụbọchị ụwa
Ọpụpụ nke ịpụ iche anaghị adị naanị n'oge ọkọchị
Ntughari, ihe ngosi nke okike weghaara na vidiyo